Seenaa Titissa(Titichaa) Seenaa Bareeddu tana obsan Dubbisa – Site Title
Posted byabdiaminbakar 16th Sep 2021 Posted inUncategorized
Bara durii dur, tiitichi akkuma kanniisaatti, mootii qabaachuudhaan soorataa isaa gamtaadhaan nadhii deyma oomishachaa akka turan himama. Akkuma kanniisaatti, iddoo kabajaa biqiltuuleefi daraaraalee halluulee miidhagoo, fooliilee haawwatoo adda addaa qaban keessa akka oolaa turan himama.
Diina isaanii gamtaan itti duuluudhaan of kabachiisaa turan. Oomisha deyma isaanii soorataafi qorichaaf waan fayyadamaniif bineensotaafi beeyladoota adda addaa, akkasumaas dhalla namaa biratti kabaja ol aanaadha qabaachaati turan.
Sonsi jiruufi jireenya tiitichaatiifi kanniisaatti waan hinaafaniif, mootii isaanii akka ajjeesaniifi bittinnaa’anii hafan taasisuudhaaf, tiitichaafi kanniisa bira deemuudhaan ” nuti sonsi waan mootii hin qabneef akkuma ofiin feenetti dhunfa dhunfaadhaan bilisummaan jiraanna. Isin garuu mootiin keessan boqonnaa fudhachuu isinitti hin dhiisu.
Demma isin hojjattan inni osoo hin hojjanne nyaata. Kanaafuu, akka keenyatti bilisummaan jiraachuudhaaf mootii keessan ajjeesuudha qabdan” jechuun isaan gorsite ja’ama.
Kanniisni yoo mootii keenya ajjeefne bittinnoofneeti salphanna. Kanaafuu, mootii keenya hin ajjeefnu jechuun murteeffatanii, hanga ammaa jiruu isaanii tan kabajaa jiraachaa jiran.
Tiitichi ammoo, yoo mootii keenya ajjeefne maaltu nu mudachuu danda’a ja’anii osoo itti hin yaadin mootii isaanii ajjeesan.
Sana booda gamtaan jiraachuun hafee, bittinnaa’anii hafuudhaan tuffataman. Sooratni isaanii deyma tahuun hafee, xuraawaafi raqatti booda aanan. Iddoon oolmaya isaanii iddoo kabajaa tahuun hafee, dikeefi ijaan iddoo jiruufi jireenya isaanii ta’e hafe.
Madda qoricha dhibee adda addaa tahuun isaanii hafee, madda dhibee adda addaa tahuudhaan jibbaafi abaarsi qooda isaanii tahuudhaan salphatanii hafan ja’ama.
Kanaafuu, nama ta’ee, namni hogganaa isaa hin jaalanne, hin kabanyeefi waliin hin dhaabbanne, nama osoo hin ta’in, tiiticha waan ta’eef, qoonni inni qabu qooda tiitichaa tahu qabaan ja’a.
Isin hoo maal jettuu?